Budada Raw Tianeptine (66981-73-5) Soosaarayaasha - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker Chemical'
Budada Raw Tianeptine (66981-73-5)
Budada Tianeptine waa nootropic iyo daawada niyadjabka ee xulashada serotonin dib-u-kobciyaha (SSRE). Guud ahaan is ..
Capacity: 1190kg / bishii
Budada Raw Tianeptine (66981-73-5) video
Budada Dhiiga Tiineptine (66981-73-5)
Noocyada Root Tianeptine waa sheybaarka antidepressant oo leh nuuc kiimiko ah oo neurochemical ah. Dufanka Tian Tineptine uma muuqdaan inay la xidhiidhaan garashada cilladda, maskax furniinka, hurdada, wadnaha iyo xididada jidhka oo leh hoos u dhac ku yimaadda xadgudub. Noocyada Root Tianeptine waxay leedahay khariidad daaweyn ah oo faa iido leh. Ma aha mid ku xiran dheef-shiid kiimikaad hooseeya, wuxuu leeyahay bioavailability sare iyo qaybin xadidan, oo si deg deg ah loo tirtiro. Inkastoo tani ay bixiso faa'iidooyinka loogu talagalay budada Raw Tianeptine ee ku saabsan walxaha daawada antidepressant tricyclic antidepressant marka la eego qiyaasta daawada titration, isbeddelka daaweynta iyo isdhexgalka daroogada ee suurtogalka ah, si deg deg ah looga dhigo waxay ka dhigtaa jadwalka jadwalka mudnaanta. Noocyada Riin Tianeptine waxay ka duwan tahay inta badan daawooyinka antidepressant-ka kaas oo aan ugu badneyn metabolised by nidaamka cytochrome cytochrome Pyongchrom, taas oo muujinaysa suurtogalnimada yar ee isdhexgalka daroogada-daroogada; Tani waa daneyn gaar ah oo loogu talagalay bukaanada waayeelka ah.
Budada Raw Tianeptine (66981-73-5) Sooc
Product Name Dufanka qamriga qaada ah
Magaca Kiimikada Budada xayawaanka Tianeptine; 66981-73-5; 72797-41-2; Roodhiga Root Tianeptine Acid; Dufanka qamriga qaada ah
Fasalka Daroogada xaaladaha niyadjabsan
Molecular Wsideed 436.951 g / mol
barafku Psaliid 148
Biological Life-Life Taariikhda lama heli karo
SOlubility Taariikhda lama heli karo
Storage Temperature qaboojiyaha
Application Waa daroogo loo isticmaalo daaweynta xanuunka niyadjabka weyn (fudud, dhexdhexaad, ama daran).
Qalabka Root Tianeptine (66981-73-5) Sharaxaad
Budada Tianeptine waa daroogo asal ahaan loo isticmaalo si loo hagaajiyo calaamadaha xanuunka weyn ee niyadjabsan (MDD). Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu caawiyo cilladda mindhicirka iyo xanuunka neefta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo kala saaraa sida tricyclic antidepressant (TCA), si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay hanti faro badan oo ka duwan daawooyinka antidepressants ee tricyclic. Tianeptine waxaa laga helay oo ay daweysay bulshada Faransiiska ee Cilmi-baadhista Caafimaadka ee 1960s. Waa magac magacyada waxaa ka mid ah Stablon, Coaxil. Tatinol, Tianeurax, iyo Salymbra.
Budada Tianeptine uma muuqato in ay la xiriirto garashada cilladda, maskaxda, hurdada, wadnaha iyo xididada jidhka oo saameyn ku yeesha xad-gudubka. Noocyada Root Tianeptine waxay leedahay khariidad daaweyn ah oo faa iido leh. Ma aha mid ku xiran dheef-shiid kiimikaad hooseeya, wuxuu leeyahay bioavailability sare iyo qaybin xadidan, oo si deg deg ah loo tirtiro. Inkastoo tani ay bixiso faa'iidooyinka loogu talagalay budada Raw Tianeptine ee ku saabsan walxaha daawada antidepressant tricyclic antidepressant marka la eego qiyaasta daawada titration, isbeddelka daaweynta iyo isdhexgalka daroogada ee suurtogalka ah, si deg deg ah looga dhigo waxay xoojisaa jadwalka jadwalka muhiimka ah. Noocyada Riin Tianeptine waxay ka duwan tahay inta badan daawooyinka antidepressant-ka kaas oo aan ugu badneyn metabolised by nidaamka cytochrome cytochrome Pyongchrom, taas oo muujinaysa suurtogalnimada yar ee isdhexgalka daroogada-daroogada; Tani waa daneyn gaar ah oo loogu talagalay bukaanada waayeelka ah.
Dhawaan, Tianeptine waxaa laga helaa wadamada Yurub, Asiya, iyo Koonfurta Ameerika. Waxaa lagu mamnuucay Boqortooyada Midowday, mana aha mid caafimaad ahaan dhakhaatiirta takhasus ku qorey Maraykanka.
Budada Tianeptine (66981-73-5) Mashruuca Hawlaha
Daraasadihii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in tianeptin uu u dhaqmo sida gebi ahaanba agonist oo ku jira maqaarka daawada opioid (MOR). Receptors-ka miyir-qabatin-ka ayaa hadda la baranayaa bartilmaameedyo wax ku ool ah oo loogu talagalay daaweynta diiqadda. Waxaa la aaminsan yahay in saameynta kiliinikada ee tianepinin ay leedahay lacagtii ay ku duubnaayeen qashinkaas. Marka lagu daro tallaabooyinkeeda ku saabsan daaweeye opioid, cilmi-baaristii hore waxay kufaraxday tallaabooyinkeeda saameynteeda ku yeelatay soo-saareyaasha daawada dopamine serotonin (D2 / 3) iyo reseptors glutamate.
Budada Tianeptine waa daawo gaar ah oo lidka diiqadda iyo daawada anxiolytic oo kicinaysa qaadashada serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT), iyo 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) unugyada maskaxda.
Inkasta oo serotonin neurotransmitters serotonin (5-HT), noradrenaline (NA) iyo dopamine (DA) la xaqiijiyay inay la xiriiraan dhacdooyinka xanuunka niyadjabka, waxaa hadda la aqoonsaday in maqnaanshaha monoamine aysan ku filnayn sharaxaadda habka waxqabadka ee antidepressant daawooyinka.
Isticmaalka budada Tianeptine (66981-73-5)
Tianeptine wuxuu hagaajiyaa calaamadaha cudurka weyn ee niyadjabka (MDD)
Ian Tianeptine wuxuu caawiyaa cilladda mindhicirka iyo neefta
▪ Tianeptine waxay hagaajisaa niyadda waxayna dejisaa welwelka.
▪ Tianeptine wuxuu kordhiyaa inta serotonin ee maskaxdu nuugto
Tianeptine waxay xoojisaa dhiirigelinta, diiradda iyo garashada, cabudhisa walwalka, dib u soo nooleynta waxayna yareyneysaa daalka garashada.
Daawada budada loo yaqaan "Tianeptine" (66981-73-5)
Budada Tianeptine guud ahaan waxaa loo qoraa qiyaas ah 12.5 mg waxaana la qaataa seddex jeer maalintii. Si ka duwan noocyada kale ee TCA-yada iyo serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), qiyaasaha tianeptine uma baahna in si tartiib tartiib ah loo kordhiyo oo qasacad marka dawada la joojiyo looma baahna.
Dhibaatooyinka kale ee budada Tianeptine (66981-73-5)
Dhibaatooyinka soo raaca ee budada tianeptine ayaa si la yaab leh u xaddidan. Marka loo barbardhigo TCA-yada kale iyo xitaa fasalka SSRI ee dawooyinka lidka diiqadda, budada tianeptine waxay ku dhowdahay inay ka madax bannaan tahay waxyeellooyinka soo raaca. In kasta oo ay saameyn khafiif ah ay leedahay, haddana waxaa muhiim ah in aan lagu qasin tianeptine-ka iyo monoamine oxidase inhibitors ama daawooyinka kale ee diiqadda sida isku-darka ay nolosha khatar gelin karaan. Tianeptine sidoo kale laguma qasi karo suuxdinta isticmaalkeeduna waa inuu joogsadaa 24-48 kahor qalliinka qalliinka ee u baahan suuxdinta ama hypnotics. Waa kuwan wax yar oo ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee la xiriira tianeptine.
▲ afka oo qalala
▲ Isbeddel ku yimaada rabitaanka cuntada
▲ Niyad jabka naas-nuujinta
▲ Aragga cakiran
▲ Dhawaaqa jinsiga oo yaraaday